Dzimwe Mota dzeMota | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rubric: Zvimwe zvinyorwa zveAust
Nzira yekushambidza poplar buds kumba? Nzira yekushambidza sei mararamiro epoplar kubva kumushini?
Nguva yechando yakanga ichangopera nematambudziko ayo nenzira yehusemuti reagents kubva mumugwagwa, uye vatyairi vakakwanisa kufema kugomera kweimwezve, dambudziko rakafanana rakaoma rakaonekwa pakatarisana. Iyi papa, ...
Gara pasi pasi bhabheri, ungazotanga sei motokari? Nzira yekutanga motokari iwe pachako kana bhati ragara pasi
Mamiriro ezvinhu apo bhati rakakundikana inozivikanwa kune chero mupi wemotokari. Sezvo mutemo, izvi zvinowanzoitika panguva inenge isingaenzaniswi uye zvinotarisana nematambudziko makuru. Kana mumaguta kana kusunungurwa kwebheteri kunotyisa kunonoka ...
Chero zvazviri, kutora-ups kunowanzozara muUnited States. Uyezve, America ndiyo nyika yekwavo. Nhoroondo yemotokari yakatanga nebhaal pfungwa. Vagadziri vekambani "Chevrolet" (pickup yakakudzwa chaizvoizvo ...
"Lada Kalina" ngoro uye hatchback: unyanzvi hwehuchenjeri. "Lada Kalina 2" - motokari itsva yezera
Mu2013, AvtoVAZ yakafadza vatyairi nemhando nyowani, mairi inenge hwese tekinoroji hunyanzvi hwakagadziriswa. "Lada Kalina 2" imota-vhiri vhiri mota mota ine yakakwira kutungamira uye yakaringana mushe.
Ndeipi yemotokari yekutenga ku200000? Tenga motokari muRussia: mitengo, ruzivo mazano, kuongorora
Saka ndeipi motokari inotenga ku200000? Muzvokwadi, zvingasarudzwa ndezvisingakoshi zvekuwanda. Sezvavanotaura - nekuda kwekunaka kose nemuvara. German, Japanese, Russian, American - whatever you like ...
Kudzorera mhepo inopisa VAZ-2114 ita iwe pachako
Hatsheni crane mumotokari VAZ-2114 - ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakashata zvakanyanya zvehutano hwekugadzirisa. Anoputsika kakawanda zvokuti vazhinji vevatengesi vemotokari, vawana ruzivo, vasina matambudziko, vanozvishandura pachavo ku ...
Homemade diesel motokari. Bhasikoro dieseri zviite iwe pachako
Shanduro yemotokisi uye moteri inonzi diesel yakagadzirwa kusvika panguva imwe chete. Zvisinei, izvi zvombo zvakapfuura nenzira dzakasiyana dzekushanduka-shanduka. Vashomanana vangave vakafungidzira kuti kana izvi zvivakwa zvichishanda ...
Chii chinonzi crossover (motokari)? SUVs uye crossovers
Off-nzira mota uye crossovers imotokari zvine hukuru hwakakura. Zvese zviri muguta uye kunze kwedzimba, ishamwari dzako dzakavimbika. Chii chinonzi crossover (mota) Crossovers - ichi chitsva ...
Backoe Loader JCB 3CX Super: tsanangudzo dzehuchenjeri, bhuku rekudzidzisa
Bhizimisi reBritish JCB rakakurumbira munyika nekuda kwayo yakagadzirwa uye yakagadzirwa nemagetsi ekugadzira. Imwe nzvimbo inokosha muhutano hwekambani inobatwa ne backhoe loaders. Chimwe chezvinhu zvakakurumbira zvakadai zvekombiki ...
"Lada 2170" ("Priora"): unyanzvi hwekugadzira, kuongorora
"Lada Priora-2170" - mota, yakatanga kugadzirwa neBSVAZ mu2007 mudan. Gare gare, mu2008, hatchback yakapinda mukugadzirwa kwemazhinji, uye mu2009, ngoro. Zvakakosha kucherechedza kuti ...
KAMAZ-65115: technic specifications, description, photos
KAMAZ-65115, iyo inyanzvi yehutungamiri yehuchazoiswa pasi apa, yakagadzirwa kubvira 1995. Ngoro yacho yakatengeswa muC1998 g. Iri ndiro motokari yakasara, iyo inotakurwa uye inodonhedzwa inoitika kumashure.
Sei uchibatanidza vinyl firimu pamotokari? Nzira yekubatanidza sei firimu pamotokari. Iko kambani inotenga vinyl firimu
Kusvika iye zvino, kugadzira motokari kunoitwa nenzira dzakasiyana-siyana. Zvisinei, inonyanya kuzivikanwa motokari inofambisa vinyl firimu. Iyi nyaya inobudiswa nevakawanda vanogadzira. Mhando yacho yakakura kwazvo iyo inosarudza yakarurama ...
Patron Taker 250: kuongororwa, tsanangudzo, mapikicha, nguva huru
Iyo Patron Taker 250 mudhudhudhu ine chitarisiko chinonyengera. Kuongorora kunoonekwa kunopa fananidzo yekuti iyi imhando yekare yevamwe "vechiJapan". Asi vese vari nyanzvi uye vanofarira mudhudhudhu vanobva vangoti ...
Ndinofanira kusuka injini kana ndichichinja mafuta: nyanzvi maonero
Ndinoda here kubvisa injini kana ndichichinja mafuta? Muzvikwata zvakawanda zvemotokari unogona kuwana hurukuro inopisa panyaya iyi. Vatsigiri vese maonero maviri maonero ari 100% nechokwadi chekuti vakarurama, vachitungamirira marudzi ose e ...
"Lada Granta" sedan: tsanangudzo uye kuongororwa kwevatenzi
"Lada Granta" (sedan) - iyi ndiro zita rebhajamiro pamberi-gumbo motokari motokari, yakagadzirwa neVolga Automobile Plant. Muenzaniso weLada Kalina wakashandiswa senheyo. Mugore re2011, kutengesa kwemazhinji kwakatanga, uye mune ...
Mafuta ejini: sarfu upenyu, sarudzo, kuchengetwa
Chero ani zvake anofambisa motokari, ngaarege ari oga anotanga, anofarira mubvunzo uyu, chii pamotokari yake yekusarudza injini yemafuta, mararamiro, hutano uye zvimwe zviratidzo. Vanotaura kuti mushure mehupenyu hwehupenyu hwemafuta, se ...
Sei kune kugogodza paanenge achitenderera kuruboshwe kurudyi, kuruboshwe?
Panzvimbo yekutanga yekuva nemunhu wemotokari inonyanya kuisa pfungwa pamamiriro emigwagwa. Nokufamba kwenguva, kunzwisisa kwezvimwe zvikamu zvemichina yake inouya. Ikoko kune mikana yekuzviziva-zvekutsvaga kwemavhiri emotokari (yakaonekwa ...
Motokari kuvhara kuyerwa ndiko kuenzanisa kuenzana.
Mumunda wemotokari uye zvose zvinoshamwaridzana navo, pane mazano maviri akadaro sehuwandu hunorema uye kuvhara kurema kwemotokari. Aya ndiwo maitiro maviri, ayo anogara achitaura pamusoro pezvidzidzo zvedzidzo ...
Bhatani rewindo rewindo reVAZ-2110 harishandi
Kana bhodhi rewindo rewindo rinomira kushanda pamotokari, kutasva pamotokari iyi kunogona kuchinja. Vhura zindo muzhizha yechando kana kupfigwa muhuzha hwechando - izvi zviri pachena ...
"Chevrolet-Niva", filter cabin: replacement. GM AvtoVAZ Chevrolet Niva
Muchina waNiva Chevrolet ndeimwe yemhando dzekutanga kugadzirwa kweBSVAZ uko iyo kabhinari ficha yakaiswa kubva fekitori. Chinhu ichi chine basa rakakosha. Nezve chishandiso chayo, mhando uye kutsiva - zvimwe ...
peji 1 peji 2 ... peji 68 Next Page
Mibvunzo ye56 mu database yakagadzirwa mu 0,487 masekondi.